कला मा आधुनिक आन्दोलन संस्थापक Fauvism, Futurism, Expressionism, अतियथार्थवाद, घनभएको, आदि यहाँ कलाकारहरूको उद्देश्य रूपमा पछिल्लो शताब्दीमा यस्तो विविध घटना को परिभाषा को एक सामान्यकरण छ modernism, रूप मा मानन सकिन्छ -। वास्तविकता उच्च छ कि कला देखाउन छ, काम विशिष्ट छन् भन्ने तथ्यलाई बावजुद पहिले भन्दा ठूलो, सामाजिक अभिमुखीकरण, सामाजिक acuity।
Conceptualism को 60s मा देखा परे। अग्र-दल कला निर्देशन रूपमा। यो शैली को peculiarity मात्र चेतना को घटना गर्न कला जानकारी आधारभूत तिरस्कार छ। वैचारिक काम, कला भाषा क्षेत्रमा तरिका सम्बन्धित छ भन्ने inscriptions, कागजात, पदहरू सम्बन्धित संचार र जानकारी को स्रोत र अरू सबै कुरा छ भन्ने विश्वास गर्छन्। यो गर्न, अखबार कतरन, चिकित्सा rentgenosnimki, कच्चा भिडियो फुटेज neotretushirovannye पोट्रेट एक महाविद्यालय उपज जो प्रविधी, को एक किसिम प्रयोग गर्नुहोस्।
70-80 वर्ष मा। पछिल्लो शताब्दीमा कला आन्दोलन conceptualism को छुट्टी र लाक्षणिक, रंग एक फिर्ती द्वारा विशेषता। थप र कलाकारहरूको छैन क्यानभासमा मा, र फोटोग्राफी आफ्नो विचार महसुस गर्न थालेका छन्। आधुनिक प्रविधिहरू जो मालिकको को विधि र सम्भावनाहरू असर गर्न सक्दैन, विकास।
एकै समयमा र प्रारम्भिक 90 को दशक सम्म। हाम्रो देशमा तथाकथित सामाजिक कला उपस्थित। जो प्रशस्त मा हो ideological प्रचार clichés, गर्न समकालीन कला वर्तमान विडंबना, हास्य र व्यंग्यात्मक मनोवृत्ति यस प्रवृत्ति को कलाकार को कार्यहरूमा मा भंग थिए जनसंचार चेतना सोभियत मान्छे को। हामी यो शैली एक भित्र-बाहिर समाजवादी यथार्थवाद हो भनेर भन्न सकिन्छ।
80-एँ लागि। जस्तै, कला यस्तो रुझान द्वारा विशेषता:
1 अपार्टमेन्ट कला - कारण नसक्नुको गर्न सीधा अपार्टमेन्ट गर्न कलाकारहरूको प्रदर्शनियों को हल मा काम प्रदर्शनी। मालिकको जीवन र कला गर्न व्यंग्यात्मक मनोवृत्ति एकताबद्ध, र तिनीहरूले तस्बिरहरू बनाउनको लागि सहायक सामाग्री प्रयोग। स्थानिक संरचना आफ्नो औद्योगिक उत्पादन, घरेलू वस्तुहरू, टुकडे दृश्य वा पाठ जानकारी, र फोहोर द्वारा - परिणाम एक तथाकथित स्थापना भएको थियो।
सडक कला फारम रूपमा 2. ग्राफिट्टी। scratching र तथाकथित "reverse" रंग छैन काम सिर्जना गर्न प्रयोग गरिन्छ graffiti, तर त्यसको विपरीत, डिटर्जेंट, घरेलू रसायन मा, जस्तै विस्फोट, ट्याग, दर्जा रूपमा निर्देशन, विभिन्न समावेश छ। आज सम्म, यो शैली कि भन्दा भयंकर बहस - एक वास्तविक कला वा सामान्य बर्बरता। यसैबीच, यस क्षेत्रको सबैभन्दा गतिशील विकास रूपमा मान्यता छ।
कम्प्युटर प्रविधिको विकास कारण देखा पर्नुभयो र यस्तो कुराहरू प्रतिनिधित्व जो 3. Demoscene, रचनात्मकता र कार्यक्रम मर्ज।
4 "नयाँ जंगली", fauvism र expressionism को परम्परा मा निर्भर गर्दछ। कला यस शैली को परिणाम कुनै पनि प्रतिबन्ध र नियमहरु देखि स्वतन्त्रताको सिद्धान्त को चरम spontaneity लगियो।
कला मा 1990 मा toizm, stuckism, साथै भिडियो खेल र वेब कला जस्ता क्षेत्रमा छन्। र नयाँ सहस्राब्दी को शुरुवात संग हामी सडक कला, सम्बन्ध, कला, fanizm, VJ, सफ्टवेयर कला पायो।
कला मा आधुनिक रुझान नै प्रतिबिम्बित हाम्रो समाजमा ठाउँ लिन भनेर धेरै सामाजिक प्रक्रियाहरु, निरन्तर विकसित छ। कलाकार, फोटोग्राफर, मूर्तिकारहरूले जीवन आफ्नै दृष्टि, त्यो ठाउँ लिइरहेको घटना आफ्नो मनोवृत्ति कामहरू प्रतिबिम्बित। खैर, आधुनिक प्रविधि र कला मा नयाँ रुझान मात्र ठूलो मात्रा, सुलभ र लोकप्रिय बन्न, विकास गर्न मदत।
": निन्जा जाओ lego" एक आकर्षित गर्न कसरी विवरण
पाठ चित्रकला। कसरी सरल पेन्सिल pigtail आकर्षित गर्न
हट कैंचीसँग कपाल कता कता छ: टिप र प्रक्रिया सुविधा
नयाँ कृत्रिम पाइन: प्रकार, लाभ, मूल्य। कसरी एक कृत्रिम पाइन इकट्ठा गर्न: निर्देशन
"पसल, पसल": मास्को मा स्टोर र रेस्टुरेन्ट बारेमा समीक्षा